မစပ်စု| December 7, 2012 | Hits:1,259
12 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website 12345 GOALS December 7, 2012 - 2:52 pm	“အများကြီးတွေးလို့ရတဲ့ Message ကို ပေးလိုက်တာပါ။…. ဒီလိုမျိုး ပုံစံ နောက်နောင် မရေးတော့ပါဘူး။ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ” ဆိုပြီး တေးရေး တေးဆို သြရသက ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက တဆင့် တောင်းပန်လိုက် ပြန်ပါတယ်။ ( ဒါ တမင်လုပ်လွှတ်လိုက်မှန်းသိပါတယ်။ ) “ကျမတို့ သီချင်းထက် ညစ်ညမ်းတဲ့ သီချင်းတွေ အများကြီးပါ။ …..” (သီချင်းက ညစ်ညမ်းမှန်း ၀န်ခံထားပါတယ်။)